ဂ်ပန္မီဒီယာမွ သတင္းေၾကညာခဲ့ရာမွာ-ကိုယ့္ျပည္သူျပည္သားေတြကို သတ္ျဖတ္မူေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အျပင္းအထန္ေဝဖန္မူေတြကို ခံေနရတဲ့ စကစ ရဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မအလ က ေမာ္စကို ကို ေရာက္ရွိေနပုံကို ဂ်ပန္မီဒီယာ ANNမွအမိအရ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္.. ၂၂ရက္ေန႔က ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ သို႔ ေရာက္ရွိလာတဲ့
မအလ က ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေထာက္အတြင္းေရးမႉး က က်င္းပေပးတဲ့ ပါတီကို မိနစ္၂၀ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္..အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္မွ မအလ ကို – ဂ်ပန္ကမီဒီယာျဖစ္ပါတယ္ ဘာျဖစ္လို႔ ႐ုရွားကို လာရတာလဲလို႔ အဂၤလိပ္လိုေမးခဲ့ရာမွာ(ဂ်ပန္ဘက္က သတင္းမွာေတာ့ ဂ်ပန္စာထိုးေပးထားတာပါ) မအလ ႀကီးက သူ႔ကိုလွမ္းေမးလို႔ လွည့္ၾကည့္လိုက္ၿပီးမွ
ဂ်ပန္သတင္းေထာက္က အဂၤလိပ္လို ေမးလိုက္တဲ့အခါ အိုးတို႔အန္းတန္း ျဖစ္သြားၿပီး ဟီးဟီးဟီးဟီး နဲ႔တဖက္လွည့္ၿပီး ေရွာင္ထြက္ သြားရွာပါတယ္….ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ကလည္း မအလ ရွက္သြားတာသိေတာ့ ေဘးမွာစကားျပန္ပါမလာတာလည္းသတိထားမိေတာ့ လိုက္ေမးမေနပဲ လႊတ္ေပးထားလိုက္တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္.. မအလ မွ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Sergey Shoygu ႏွင့္လည္းေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး၊
“႐ုရွား၏ပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ စစ္တပ္သည္အင္အားအေကာင္းဆုံးျဖစ္လာခဲ့သည္” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္..ႏိုင္ငံတကာမွာ ျမန္မာကိုအထီးက်န္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ မအလ မွ ေမာ္စကို ကိုေရာက္ရွိခ်ိန္ ႐ုရွားဆီကေန လက္နက္ နဲ႔ အေထာက္အပံ့မ်ားပိုမိုရရွိလိုမူေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္မီဒီယာ ANNမွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ပါတယ္.
ဂ်ပန္သတင္းကို သင့္ေတာ္သလိုျပန္ဆိုသည္ ဗီဒီူယုိဖုိင္
crd-ဘဲဥပုပ် – SML
crd-Phoo Kyaw Zin – Future Wave
မော်စကိုမြို့တော်ရှိ ဟိုတယ် သို့ ရောက်ရှိလာတဲ့ မအလ ကို ဂျပန်သတင်းထောက်မှ အင်္ဂလိပ်လို အင်တာဗျုးချိန် မအလ ကြီးမှ ဟီးဟီး ဟီးဟီးနဲ့ တဖက်လှည့်သွားမူကို ဂျပန်မီဒီယာများမှ အမိအရထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ ( ထွက်ပြေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ပါဝင်ပါသည်။ )
ဂျပန်မီဒီယာမှ သတင်းကြေညာခဲ့ရာမှာ-ကိုယ့်ပြည်သူပြည်သားတွေကို သတ်ဖြတ်မူကြောင့် နိုင်ငံတကာရဲ့အပြင်းအထန်ဝေဖန်မူတွေကို ခံနေရတဲ့ စကစ ရဲ့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင် မအလ က မော်စကို ကို ရောက်ရှိနေပုံကို ဂျပန်မီဒီယာ ANNမှအမိအရ ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်.. ၂၂ရက်နေ့က ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တော်ရှိ ဟိုတယ် သို့ ရောက်ရှိလာတဲ့
မအလ က ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး က ကျင်းပပေးတဲ့ ပါတီကို မိနစ်၂၀ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်..အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဂျပန်သတင်းထောက်မှ မအလ ကို – ဂျပန်ကမီဒီယာဖြစ်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ ရုရှားကို လာရတာလဲလို့ အင်္ဂလိပ်လိုမေးခဲ့ရာမှာ(ဂျပန်ဘက်က သတင်းမှာတော့ ဂျပန်စာထိုးပေးထားတာပါ) မအလ ကြီးက သူ့ကိုလှမ်းမေးလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးမှ
ဂျပန်သတင်းထောက်က အင်္ဂလိပ်လို မေးလိုက်တဲ့အခါ အိုးတို့အန်းတန်း ဖြစ်သွားပြီး ဟီးဟီးဟီးဟီး နဲ့တဖက်လှည့်ပြီး ရှောင်ထွက် သွားရှာပါတယ်….ဂျပန်သတင်းထောက်ကလည်း မအလ ရှက်သွားတာသိတော့ ဘေးမှာစကားပြန်ပါမလာတာလည်းသတိထားမိတော့ လိုက်မေးမနေပဲ လွှတ်ပေးထားလိုက်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်.. မအလ မှ ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Sergey Shoygu နှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊
“ရုရှား၏ပံ့ပိုးမှုကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ စစ်တပ်သည်အင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်” ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်..နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာကိုအထီးကျန်အောင်လုပ်နေတဲ့ မအလ မှ မော်စကို ကိုရောက်ရှိချိန် ရုရှားဆီကနေ လက်နက် နဲ့ အထောက်အပံ့များပိုမိုရရှိလိုမူကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဂျပန်မီဒီယာ ANNမှ ထုတ်လွှင့်သွားခဲ့ပါတယ်.
ဂျပန်သတင်းကို သင့်တော်သလိုပြန်ဆိုသည် ဗီဒီူယိုဖိုင်
crd-ဘဲဥပုပျ – SML